mairie-antananarivo – CEG Analamahitsy : CUA- MEN
CEG Analamahitsy : CUA- MEN
administrateur 10 jolay 2018 Commentaires fermés
Mikasika ny raharaha tany eny amin’ny CEG Analamahitsy eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, tsy nivarotra tany ary tsy hivarotra izany mihitsy ny Kaominina. Nisy ny tafa tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny CEG Analamahitsy androany maraina.
Nisongadina teny amin’ny CEG Analamahitsy nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny avy amin’ny Kaominina Antananari vo Renivohitra, nahitana ny talen’ny seraseran’ny Kaominina Dina Ramananari vo, sy ny mpanolotsaina Monisipaly ao amin’ny Boriboritany faha-5, Fetra Razafitsimialona, ary ny avy amin’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena nahitana ny lehiben’ny ZAP ao amin’ny Boriboritany faha-5, Johnson Ranaivoarisoa.
Nohamafisina tamin’izany fa olon-tsotra no tompon’io tany eo amin’ny CEG Analamahitsy io, ilain’ny tompony ankehitriny ny tany. Noho izay antony izay nangataka tany tamin’ny Kaominina ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena ka nomena tany lehibe eo akaiky eo ihany, amin’izany toerana vaovao izany no hanamboarana CEG vaovao hataon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny mpiara-miombon’antoka aminy. Tsy hiala eo amin’ny CEG amin’izao fotoana izao ny mpianatra raha tsy vita ny CEG vaovao.
Manazava ny talen’ny serasera ao amin’ny CUA, Dina Ramananarivo fa ezahina ho vitaina amin’ ny fidirana taompianarana 2019 izao ny foto-drafitr’asa vaovao manarapenitra izay ahitana efitrano 20 isa sy toerana filalaovana malalaka; Marihana fa ny MEN sy ny mpiara-miombon’ antoka aminy no hanagana ny foto-drafitr’asa fa ny anjarany cua dia nanome tany ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana mba hitsijovana ny vahoaka mpianatra Malagasy hanaganana fianarana.